* အသက်ကြီးတဲ့ မိဘတွေမှာ ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ မိဘမာန် အကြောင်း . . * - Myanmar People Alliance
* အသက်ကြီးတဲ့ မိဘတွေမှာ ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ မိဘမာန် အကြောင်း . . *
သက်ကြီးမိဘ အိမ်မှာရှိနေရင် အနည်းနဲ့အများတော့ အတူနေတဲ့ သားသမီးနဲ့ စကားများတတ်ကြတယ်။ အဓိက ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းက အိမ်ဦးခန်းမှာ တင်ပြီး ကျွေးထားလျှက်နဲ့ အဖေ အမေတွေက အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်မစားကြဘူး။ သားသမီး တွေဖြစ်စေချင်တာက အေးအေးလူလူ ဘုရား တရား လုပ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်နေစေချင်ကြတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလည်း တချက်လေးမှ အငြိမ် မနေတတ်ကြဘူး။ နောက်ဖေးဝင်လိုက် အိမ်ရှေ့ ထွက်လိုက် ဟိုဟာဆိုလည်း စပ်ကနဲ ဝင်လုပ်လိုက် ဒီဟာဆိုလဲ စပ်ကနဲ ဝင်ပြောလိုက် ….
ဝယ်ပေးထားတဲ့ အဝတ်အစားသစ်တွေဆို ထုတ်မဝတ် အနှစ်နှစ် အလလ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အဝတ်အစား ဂုတ်စုတ် အနုတ်စုတ်တွေဆို အေးလို့ပါဆိုပြီး ဝတ်၊ အိမ်တွင်းစီး ဖိနပ် ဝယ်ပေးထားလည်း ရေချိုးခန်းသွားရင် ရော်ဘာ ဖိနပ် နောက်မြီးပြတ်နဲ့ ပြောလို့ ဆိုလိုလည်းမရ ။
ပြောလည်း နားမထောင် ခဏပဲ နောက်တော့လည်း နေမြဲတိုင်း ….. ဧည့်သည်ဆောင်သည် လာရင်တော့ ရှေ့မှာ သားအမိ သားအဖ ပြုံးပြလို့ တည့်သပေါ့။ ပြန်သွားရင် ရန်ဖြစ်မြဲ ပူညံမြဲ ….. ။
နစ်နာသွားလောက်အောင် မဟုတ်ပေမယ့် သားနဲ့အဖ သမီးနဲ့အမိ တကွိကွိနဲ့ စကားတွေ ကျိတ်များ တစောင်းစေးနဲ့ မျက်ချေးလို ဖြစ်နေတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား ….။ ကိုယ့်လူတို့ အိမ်မှာ မိသားစုထဲမှာမှ မဟုတ်ဘူးဗျ။
လမ်းထဲမှာ လူကြီးတွေနဲ့ အတူနေ အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ ရှိရင် အိမ်ခြေ ၉၀ ကျော်လောက်က ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ကျန်တဲ့ ၁၀ အိမ်လောက်က လေဖြတ်နေတဲ့ မိဘတွေ မသန်မစွမ်း ကိုယ်ပြုစုမှ ရတော့မယ့် လူနာတွေပဲ။
ဘာကြောင့် ဒီလို လူကြီးမိဘနဲ့ သားသမီးတွေအကြား ပဋိပက္ခအငယ်စားလေးတွေ ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ …. မိဘအကြောင်း မပြောခင် ကိုယ့်လူတို့ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြည့်။ ခင်များတို့မှာ သားသမီးရှိရင် အဲဒီသားသမီးတွေကို ချစ်လား ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့် ။ ချစ်တာပေါ့ဗျ။
ခင်ဗျားတို့ စားရမယ့် အစားအသောက်တောင် မစားပဲ သူတို့ကျွေးမွေးချင် သူတို့လေးတွေ ဘဝတိုးတက်ရေး အတွက် ခင်များတို့ ပေးဆပ်ချင်တယ် မဟုတ်လား။ ခင်များတို့ မစားရ မဝတ်ရ မသုံးရရင် နေပေ့စေလေ။
တစ်ခါတစ်လေ အပိုးမကျိုး ဒေါင့်မကျိုး ချိုးလာရင် တီးထည့်လိုက်ချင်တယ် ဟုတ် ….သူတို့ဘဝ ဖြောင့်မတ်စေချင်လို့ မဟုတ်လား။ ခိုင်းစားဖို့ မဟုတ်ဘူးလေ …. ရှာထားသမျှ သူတို့နောင်ရေး မဟုတ်လား။ အေး အဲဒီ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မိဘမာန် လို့ခေါ်တယ်။
ခင်ဗျားတို့ အခု အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ … ။ အေး … ၃၀ နှစ် – ၄၀ နှစ် လို့ ပြောရင် …. သူတို့ရင်တွင်းမှာ ကိန်းဝပ်တည်လာတဲ့ မိဘမာန် ဟာလည်း ခင်ဗျားတို့ အသက်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပဲ။
လူဆိုတာ ဒီတိုင်း မပြောင်းလဲပဲ နေတာမှ မဟုတ်တာ။ အသက်အရွယ်အလိုက် ဇရာဆိုတာ လွှဲရှောင်လို့ ရတာလိုက်လို့။ ခင်များတို့တောင် ဆယ်ကျော်သက် ပျိုမျစ်နုနယ်တဲ့ အရွယ်က နေပြီး အိမ်ထောင်ရက်သား ကျလို့ သားတွေသမီးတွေနဲ့ မဟုတ်လား။
မိဘတွေ ဇရာဝင်တော့ အိုပြီပေါ့။ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကနေ ပင်စင်ယူ အနားပေးလိုက်ကြပါရော။ ဒီတော့ သူတို့မှာ နိစ္စဒူဝ နှစ် ၃၀ ကျော် လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကြီး ရပ်သွားရော။ ဝင်ငွေလည်း မစို့မပို့အထိ လျော့ကျသွားပါလေရော။
ဒီထက်ဆိုးတာက ကျင်လည်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ အဆက်အဆံ ပြတ်သွားတော့ ယောင်ချာချာဖြစ်နေပါရော …. ။ ညအိပ်ယာဝင်ရင် အိပ်မပျော်ကြဘူးဗျ။
သူတို့ တသက်လုံး ရှာဖွေ ကျွေးမွေးပြီး သားသမီးတွေက သူတို့အပေါ် မှီခိုလာတော့ ရှိခဲ့တဲ့ မိဘမာန်ဟာ အခုအချိန်မှာ သူတို့ကို ဖိစီးသောကရောက်စေသဗျ။
သူတို့က သားသမီးတွေရဲ့ ဝင်ငွေအပေါ် ပြန်မှီခိုရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာရင် သူတို့ရဲ့ မသိစိတ် ထဲကနေပြီး အားငယ် အားနာလာတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သားသမီးတွေအပေါ် သူတို့ အတွက်နဲ့ ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး မဖြစ်စေချင်ကြဘူး။
ဒါကြောင့် သူတို့ဘက်က ချိုးချံချွေတာတယ်။ သူတို့အတွက်နဲ့ သားသမီးတွေ အပို အကုန်အကျ မများစေချင်ဘူး။ သားသမီးတွေကို အားပြန်နာ နေတော့တယ်။
ဒီတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အတူနေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ လူပိုအဖြစ် သားသမီးတွေက မမြင်အောင် တတ်နိုင် တယ်လို့ သူတို့ထင်တဲ့အလုပ်ကို ပါဝင်ကူညီပေး တတ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက မစွမ်းတော့ပေမယ့် စိတ်က ဆောင်နေတော့ သူတို့ တတ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အိမ်တွင်းအလုပ်တွေမှာ ဝင်လုပ်တော့တာပါပဲ။ သားသမီး ရှာဖွေတဲ့ ငွေကို အလကားနေရင်း ထိုင်ဖြုန်းတယ်လို့ အထင်မခံနိုင်တဲ့ မိဘမာန်ကိုး ….။
အသက်အရွယ်အရ စိတ်ကသာဆောင်နေတာ ကိုယ်ခန္ဓာက မလိုက်နိုင်တော့ လုပ်ရင်းတန်းလန်းနဲ့ အလဲလဲ အကွဲကွဲတွေ ဖြစ်ကုန်ရော ….။ ဒီမှာတွင် သားသမီးတွေက ဂရုဏာဒေါသနဲ့ ဆူပူ … မိဘတွေက ကွယ်ရာ အိပ်ယာထဲဝင်ပြီး ပုတီးလေး စိတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်ကျရပါလေရော ။
မိဘလည်း စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း မိဘ မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်တော့ အလုပ်အကိုင် ထစ်ငေါ့ တာပေါ့ဗျာ။ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ မိဘနဲ့ အတူနေတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းအားကို နားလည်ပါ။
ကိုယ်ငယ်စဉ် ဘဝတလျှာက်လုံးမှာ သူတို့ဘာကို ခုံမင် နှစ်ခြိုက်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ ဥပမာ နှစ်ချောင်းထိုး ထိုးတတ်တဲ့သူဆိုလည်း ကိုယ့်အတွက် ဆွယ်တာ မြေးတွေအတွက် စတဲ့ အလုပ်တခုခုပေးခြင်းဟာ ငါတခုခု လုပ်ပေးနိုင်သေး ပါလား။ ငါ့မိသားစုအတွက် အသုံးကျသေးပါလား ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ မိဘမာန်ကို မြှင့်တင်ပေးရာ ရောက် ပါတယ်။
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ သူတို့အရွယ် သူတို့ အသိနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်။ ခင်ဗျားတို့က ဆရာသွား မလုပ်ကြနဲ့ဗျ။ သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူတို့စိတ်ဝင်စားပြီး သူတို့အတွက်လည် မပင်ပန်းမယ့် အလုပ်မျိုးကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ပေးထားရင် အာရုံငြိမ်ပြီး အိမ်အေးတာပေါ့ဗျာ။
အဓိက ပြောချင်တာက ခင်များတို့ရဲ့ လက်တောက် လောက် သားသမီးတွေက ခင်ဗျားတို့ကို ပြန်ပြောရင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ။ ဒါတောင် ခင်ဗျားတို့ ကျွေးမွေး ယုယ သုတ်သင်ပြုစုထားတာတဲ့ လေး ငါး ဆယ်နှစ် အရွယ် ကလေးတွေနော်။ အဖေကလည်း အမေ ကလည်း လုပ်လာရင် ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးလဲ။
အေး …. သူတို့ အနှစ် သုံး လေးဆယ် ကျွေးမွေးပြုစု ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားကြီးကလည်း ဆိုရင် သူတို့စိတ်ထဲ ဘယ့်နှယ်နေမလဲ ….. ။ ကိုယ်ချင်းစာ စဉ်းစားကြည့် ….. ။ အဲတာ ” မိဘမာန်” လို့ခေါ်တယ်။
ကိုဇော် ဘန်ကောက် ၁၅:၃၈ ၂၅/၀၉/၂၀၁၈
မိဘကျေးဇူး သိတတ်ပြီး. . အေးချမ်းသာယာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေဟု ဆုမွန်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်. . ။
သကျကွီးမိဘ အိမျမှာရှိနရေငျ အနညျးနဲ့အမြားတော့ အတူနတေဲ့ သားသမီးနဲ့ စကားမြားတတျကွတယျ။ အဓိက ဖွဈရတဲ့အကွောငျးအရငျးက အိမျဦးခနျးမှာ တငျပွီး ကြှေးထားလြှကျနဲ့ အဖေ အမတှေကေ အေးအေးဆေးဆေး ထိုငျမစားကွဘူး။ သားသမီး တှဖွေဈစခေငျြတာက အေးအေးလူလူ ဘုရား တရား လုပျပွီး ငွိမျငွိမျနစေခေငျြကွတယျ။
သကျကွီးရှယျအိုတှကေလညျး တခကျြလေးမှ အငွိမျ မနတေတျကွဘူး။ နောကျဖေးဝငျလိုကျ အိမျရှေ့ ထှကျလိုကျ ဟိုဟာဆိုလညျး စပျကနဲ ဝငျလုပျလိုကျ ဒီဟာဆိုလဲ စပျကနဲ ဝငျပွောလိုကျ ….
ဝယျပေးထားတဲ့ အဝတျအစားသဈတှဆေို ထုတျမဝတျ အနှဈနှဈ အလလ ဟောငျးနှမျးနတေဲ့ အဝတျအစား ဂုတျစုတျ အနုတျစုတျတှဆေို အေးလို့ပါဆိုပွီး ဝတျ၊ အိမျတှငျးစီး ဖိနပျ ဝယျပေးထားလညျး ရခြေိုးခနျးသှားရငျ ရျောဘာ ဖိနပျ နောကျမွီးပွတျနဲ့ ပွောလို့ ဆိုလိုလညျးမရ ။
ပွောလညျး နားမထောငျ ခဏပဲ နောကျတော့လညျး နမွေဲတိုငျး ….. ဧညျ့သညျဆောငျသညျ လာရငျတော့ ရှမှေ့ာ သားအမိ သားအဖ ပွုံးပွလို့ တညျ့သပေါ့။ ပွနျသှားရငျ ရနျဖွဈမွဲ ပူညံမွဲ ….. ။
နဈနာသှားလောကျအောငျ မဟုတျပမေယျ့ သားနဲ့အဖ သမီးနဲ့အမိ တကှိကှိနဲ့ စကားတှေ ကြိတျမြား တစောငျးစေးနဲ့ မကျြခြေးလို ဖွဈနတေတျကွတယျ မဟုတျလား ….။ ကိုယျ့လူတို့ အိမျမှာ မိသားစုထဲမှာမှ မဟုတျဘူးဗြ။
လမျးထဲမှာ လူကွီးတှနေဲ့ အတူနေ အိမျထောငျစု ၁၀၀ ရှိရငျ အိမျခွေ ၉၀ ကြျောလောကျက ဒီအတိုငျးပဲ ဖွဈတတျကွတယျ။ ကနျြတဲ့ ၁၀ အိမျလောကျက လဖွေတျနတေဲ့ မိဘတှေ မသနျမစှမျး ကိုယျပွုစုမှ ရတော့မယျ့ လူနာတှပေဲ။
ဘာကွောငျ့ ဒီလို လူကွီးမိဘနဲ့ သားသမီးတှအေကွား ပဋိပက်ခအငယျစားလေးတှေ ဖွဈရသလဲဆိုတော့ …. မိဘအကွောငျး မပွောခငျ ကိုယျ့လူတို့ကိုယျတိုငျ စဉျးစားကွညျ့။ ခငျမြားတို့မှာ သားသမီးရှိရငျ အဲဒီသားသမီးတှကေို ခဈြလား ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျမေးကွညျ့ ။ ခဈြတာပေါ့ဗြ။
ခငျဗြားတို့ စားရမယျ့ အစားအသောကျတောငျ မစားပဲ သူတို့ကြှေးမှေးခငျြ သူတို့လေးတှေ ဘဝတိုးတကျရေး အတှကျ ခငျမြားတို့ ပေးဆပျခငျြတယျ မဟုတျလား။ ခငျမြားတို့ မစားရ မဝတျရ မသုံးရရငျ နပေစေ့လေေ။
တဈခါတဈလေ အပိုးမကြိုး ဒေါငျ့မကြိုး ခြိုးလာရငျ တီးထညျ့လိုကျခငျြတယျ ဟုတျ ….သူတို့ဘဝ ဖွောငျ့မတျစခေငျြလို့ မဟုတျလား။ ခိုငျးစားဖို့ မဟုတျဘူးလေ …. ရှာထားသမြှ သူတို့နောငျရေး မဟုတျလား။ အေး အဲဒီ ခငျဗြားတို့ရဲ့ ရငျထဲမှာထားတဲ့ စိတျဓါတျကို မိဘမာနျ လို့ချေါတယျ။
ခငျဗြားတို့ အခု အသကျ ဘယျလောကျ ရှိပွီလဲ … ။ အေး … ၃၀ နှဈ – ၄၀ နှဈ လို့ ပွောရငျ …. သူတို့ရငျတှငျးမှာ ကိနျးဝပျတညျလာတဲ့ မိဘမာနျ ဟာလညျး ခငျဗြားတို့ အသကျနဲ့ ထပျတူထပျမြှပဲ။
လူဆိုတာ ဒီတိုငျး မပွောငျးလဲပဲ နတောမှ မဟုတျတာ။ အသကျအရှယျအလိုကျ ဇရာဆိုတာ လှဲရှောငျလို့ ရတာလိုကျလို့။ ခငျမြားတို့တောငျ ဆယျကြျောသကျ ပြိုမဈြနုနယျတဲ့ အရှယျက နပွေီး အိမျထောငျရကျသား ကလြို့ သားတှသေမီးတှနေဲ့ မဟုတျလား။
မိဘတှေ ဇရာဝငျတော့ အိုပွီပေါ့။ လုပျကိုငျနတေဲ့ အလုပျတှေ လုပျငနျးကိုငျငနျးတှကေနေ ပငျစငျယူ အနားပေးလိုကျကွပါရော။ ဒီတော့ သူတို့မှာ နိစ်စဒူဝ နှဈ ၃၀ ကြျော လုပျခဲ့တဲ့ အလုပျကွီး ရပျသှားရော။ ဝငျငှလေညျး မစို့မပို့အထိ လြော့ကသြှားပါလရေော။
ဒီထကျဆိုးတာက ကငျြလညျနရေတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ အဆကျအဆံ ပွတျသှားတော့ ယောငျခြာခြာဖွဈနပေါရော …. ။ ညအိပျယာဝငျရငျ အိပျမပြျောကွဘူးဗြ။
သူတို့ တသကျလုံး ရှာဖှေ ကြှေးမှေးပွီး သားသမီးတှကေ သူတို့အပျေါ မှီခိုလာတော့ ရှိခဲ့တဲ့ မိဘမာနျဟာ အခုအခြိနျမှာ သူတို့ကို ဖိစီးသောကရောကျစသေဗြ။
သူတို့က သားသမီးတှရေဲ့ ဝငျငှအေပျေါ ပွနျမှီခိုရတဲ့ အနအေထားကို ရောကျလာရငျ သူတို့ရဲ့ မသိစိတျ ထဲကနပွေီး အားငယျ အားနာလာတယျ။ သူတို့ကိုယျသူတို့ သားသမီးတှအေပျေါ သူတို့ အတှကျနဲ့ ဝနျထုပျ ဝနျပိုး မဖွဈစခေငျြကွဘူး။
ဒါကွောငျ့ သူတို့ဘကျက ခြိုးခြံခြှတောတယျ။ သူတို့အတှကျနဲ့ သားသမီးတှေ အပို အကုနျအကြ မမြားစခေငျြဘူး။ သားသမီးတှကေို အားပွနျနာ နတေော့တယျ။
ဒီတော့ သူတို့ကိုယျသူတို့ အတူနတေဲ့ မိသားစုထဲမှာ လူပိုအဖွဈ သားသမီးတှကေ မမွငျအောငျ တတျနိုငျ တယျလို့ သူတို့ထငျတဲ့အလုပျကို ပါဝငျကူညီပေး တတျတယျ။
ဒီနရောမှာ စဉျးစားကွညျ့ဗြာ သူတို့ရဲ့ ကိုယျခန်ဓာက မစှမျးတော့ပမေယျ့ စိတျက ဆောငျနတေော့ သူတို့ တတျနိုငျမယျလို့ ထငျရတဲ့ အိမျတှငျးအလုပျတှမှော ဝငျလုပျတော့တာပါပဲ။ သားသမီး ရှာဖှတေဲ့ ငှကေို အလကားနရေငျး ထိုငျဖွုနျးတယျလို့ အထငျမခံနိုငျတဲ့ မိဘမာနျကိုး ….။
အသကျအရှယျအရ စိတျကသာဆောငျနတော ကိုယျခန်ဓာက မလိုကျနိုငျတော့ လုပျရငျးတနျးလနျးနဲ့ အလဲလဲ အကှဲကှဲတှေ ဖွဈကုနျရော ….။ ဒီမှာတှငျ သားသမီးတှကေ ဂရုဏာဒေါသနဲ့ ဆူပူ … မိဘတှကေ ကှယျရာ အိပျယာထဲဝငျပွီး ပုတီးလေး စိတျရငျးနဲ့ မကျြရညျကရြပါလရေော ။
မိဘလညျး စိတျဆငျးရဲရတယျ။ ခငျဗြားတို့လညျး မိဘ မကျြရညျကအြောငျလုပျတော့ အလုပျအကိုငျ ထဈငေါ့ တာပေါ့ဗြာ။ အသကျအရှယျရလာတဲ့ မိဘနဲ့ အတူနတေဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ပငျကိုယျစှမျးအားကို နားလညျပါ။
ကိုယျငယျစဉျ ဘဝတလြှာကျလုံးမှာ သူတို့ဘာကို ခုံမငျ နှဈခွိုကျသလဲဆိုတာ စဉျးစားပါ။ ဥပမာ နှဈခြောငျးထိုး ထိုးတတျတဲ့သူဆိုလညျး ကိုယျ့အတှကျ ဆှယျတာ မွေးတှအေတှကျ စတဲ့ အလုပျတခုခုပေးခွငျးဟာ ငါတခုခု လုပျပေးနိုငျသေး ပါလား။ ငါ့မိသားစုအတှကျ အသုံးကသြေးပါလား ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ မိဘမာနျကို မွှငျ့တငျပေးရာ ရောကျ ပါတယျ။
တရားအားထုတျတယျဆိုတာ သူတို့အရှယျ သူတို့ အသိနဲ့ လုပျတဲ့အလုပျ။ ခငျဗြားတို့က ဆရာသှား မလုပျကွနဲ့ဗြ။ သူတို့ကိုအသိအမှတျပွုတဲ့အနနေဲ့ သူတို့စိတျဝငျစားပွီး သူတို့အတှကျလညျ မပငျပနျးမယျ့ အလုပျမြိုးကို သတျသတျမှတျမှတျ လုပျပေးထားရငျ အာရုံငွိမျပွီး အိမျအေးတာပေါ့ဗြာ။
အဓိက ပွောခငျြတာက ခငျမြားတို့ရဲ့ လကျတောကျ လောကျ သားသမီးတှကေ ခငျဗြားတို့ကို ပွနျပွောရငျ ဘယျလိုနကွေမလဲ။ ဒါတောငျ ခငျဗြားတို့ ကြှေးမှေး ယုယ သုတျသငျပွုစုထားတာတဲ့ လေး ငါး ဆယျနှဈ အရှယျ ကလေးတှနေျော။ အဖကေလညျး အမေ ကလညျး လုပျလာရငျ ဘယျလောကျစိတျဆိုးလဲ။
အေး …. သူတို့ အနှဈ သုံး လေးဆယျ ကြှေးမှေးပွုစု ပညာသငျပေးခဲ့တဲ့ ခငျဗြားတို့က ခငျဗြားကွီးကလညျး ဆိုရငျ သူတို့စိတျထဲ ဘယျ့နှယျနမေလဲ ….. ။ ကိုယျခငျြးစာ စဉျးစားကွညျ့ ….. ။ အဲတာ ” မိဘမာနျ” လို့ချေါတယျ။
ကိုဇျော ဘနျကောကျ ၁၅:၃၈ ၂၅/၀၉/၂၀၁၈
မိဘကြေးဇူး သိတတျပွီး. . အေးခမျြးသာယာ ပြျောရှငျဖှယျကောငျးသော မိသားစုဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွသူတှေ ဖွဈကွပါစဟေု ဆုမှနျပွုပေးလိုကျပါတယျနျော. . ။